Valve Stem Seal Factory - China Valve Stem Seal, mpanamboatra
Toyota Valve Car Stem dia manisy tombo-kase ny mpanamboatra an'i China
Tombo-kase valizy fiara 90913-02060
Fitaovana: VITON, FKM
Fonosana: 8 pcs isaky ny kitapo
Nissan Viton Valin'ny valin'ny fiara mpitondra fiara
Kia Pride Valve Stem Stage China Manufacturer
Tombo-kase Valin'ny Kia Pride
Fitaovana: VITON sy NBR
Fampiharana: Aorian'ny tsena sy OEM
GOS dia manolotra amina endrika mahazatra ny tombo-kase valizy "state-of-the-art":
Peugeot Valve Valve Stem Seals Seal China Mpamatsy
Fitaovana PEUGEOT 405 206 VALVE SEALare izay manome taham-pandrefesana voafaritra ho an'ny vatan'ny valizy misy ny motera fandoroana anatiny hamonoana ny torolàlana valizy ary hampihena ny asa fitoriana ataon'ny motera. Ny tombo-kase valizy dia azo ampiasaina amin'ny motera diesel sy lasantsy miaraka ary tsy misy fanamafisana.
Tombo-kase tsy miharo: manatanteraka ny fandrefesana ny diloilo
Automotive Isuzu Valve Stem tombo-kase Solika mpamatsy China mpamatsy
Ny tombo-kase valve dia fitaovana izay manome tahan'ny fandrefesana ny menaka amin'ny fantsom-baravarankely misy motera fandoroana anatiny hamandoana ny fitarihana valizy ary hampihena ny misiona an'ny motera. Ny tombo-kase valizy GOS dia misy ho an'ny motera diesel sy lasantsy miaraka ary tsy misy fanamafisana.
Tombo-kibon'ny valin'ny fiara sy moto
Materail: FKM / VITON Temperature: -40 ～ + 250 ℃ Fanerena: ambany 0.02MPA Haingam-pandeha: ambany 10000rpm Ny tombo-kase valve dia karazana tombo-kase misy menaka, izay mazàna amin'ny alàlan'ny vatan'ny volo ivelany sy fluororubber miaraka. Ny lohataona na tariby vy manenjana tena dia napetraka eo amin'ny fanokafana ny tombo-kase misy menaka ho an'ny tehina fitarihana valizy motera. Ny tombo-kase misy menaka valizy dia afaka misoroka ny solika tsy hiditra amin'ny fantsom-panafody sy fantsom-panafody, miteraka fatiantoka solika, misoroka ny fifangaroan'ny lasantsy ...